Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa: XALAYAA QABSOO UMMATA OROMOO MARAAF (JAWAR MOHAMMAD irraa)
XALAYAA QABSOO UMMATA OROMOO MARAAF (JAWAR MOHAMMAD irraa)
Hunda dura, lammiilee keenya kan bilisummaa Oromoofi Oromiyaatiif falmachuudhaaf murteessanii hiriira guyyaa har'aa kanarratti hirmaachuun lubbuu isaanii lamuu hin deebine aarsaa godhanii jannata hawwaa, seenanan saba kana barabaraan haa yaadatun jedha. Firaafi maatii isaaniitif jajjabina haa laatu jenna. Itti aansuun ilmaan Oromoo miliyoonotaaan golee Oromiyaa hundarraa magaalota 200 ol keessatti murannoofi tokkummaan baatanii diina bargaanfachiiftanii saba keenyatti kabajaa hortaniif galanni keessan bilisummaa Oromiyaa haa ta'u jenna. Qondeessitonni keenya kan guyyoota shan qofa keessatti hiriira guddinaafi gurmaa'ina kana fakkaatu argamsiisuu dandeessan, sabni isiniin boonee jira; kana daranhoojachuu akka dandeessanis shakkii malee mirkaneessitanii jirtan. Isin waliin qabsaa'uun ulfina.
Hiriira kanarraa injifannoo gurguddaatu argame. Ummanni keenya doorsisa Wayuyaneefi ergamtoonni isaanii godhaa turan irra aanuun sodaa tokko malee bifa qindaayeen mirga isaatiif falmachuuf bahuun injifaannoo tokko. Ummanni keenya rakkoo biyya sanii karaa nagayaatiin furuuf hiree dhumaa ifaan ifatti kennuun boru balaan fedhe yoo bu'e komii kamiiyyuu afaan keessa akka qabsiifnu hiree nuuf kenne. Ummanni Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti waamicha yeroo gabaabaatiin bifa qindaawaafi tokkummaa qabuun socho'uu akka danda'u mirkaneessuun akeeka hiriira kanaa keessaa tokko. Kun dhibbaan dhibbatti galma gahee jira. Tarkaanfilee itti aansinee fudhachuu qabnuufis humna qabnu madaallee ofitti amanamummaa akka horannuuf faaydaa guddaa qaba.
Gaafin garaa namuutuu yeroo amma jiru 'maaltu itti aana' kan jedhu akka ta'e shakkin hin jiru. yaanni amma booda qabsoon nagayaa hin deemsisuu gara hidhannootti dabruu qabna jedhu jabaatee dhufee jira. Kun yaada sirriiti. Garuu ummata hanqina hidhannoo qabu, kan tarsiimoofi caasaa waraanaatin hin jaaraminiin ka'iitii mootummaadhaan walwaraani jechuun gaaga'ama bu'aa hin qabneef saba saaxiluu ta'a. Kanaafu cehuumsa tarsiimoo amma hanga ammaa irraa gara kan biraatti godhamuuf akka yaada ka'uumsaatti kan armaan gadii kana dhiheessina. .
1) Mormiin diddaa baatii saglan dabreef godhaa ture bifa daran qindaawaa ta'eefi tooftaalee haaraya dabalateen itti fufuu qaba.
a) Bofa ajjeesuuf mataa isaa tumuun eegala. Kanaafuu Qondaalota siyaasaafi waraanaa Wayyaanee ol'aanoo ummanni keenya akka ajjeefamuuf ajaja dabarsan irratti tarkaanfiin ni fudhatama. Tarkaanfiin adda durummaan loltoota, poolisootaafi hojjattoota Oromoo sirnchia tajaajilan kan qondaalota kana argachuuf hiree qabaniin raaw'atama.
b) Milishaafi poolisii ummata ajjeesu kamiyyuu irratti adabbiin walmadaalaan ni fudhatama
c) Loltoota Agaazii ummata shoorarkeessan tooftaalee dahanaa kanneen wareegama gama keenyaa xiqqeessanin nagaya dhoorguu barbaachisa. Bakka isaan kopha kophaa ykn namoota muraasaan socho'anii nyaatan, taphatan,bulaniifi oolanitti haleeluun jiilchuu barbaachisa.
3) Tarkaanfilee ofirraa ittisuu armaan olitti tarreeffaman kana hojitti hiikuuf hidhannoof rasaasni ummata keenyaaf saffisaan dhaqqabuu qaba. Kana milkeessuuf loltoonni ummanni keenya karaa danda'e hundaan ( fkn milishaa irraa hiikkachuun, bitachuun) hidhannoo harkatti galfachuu qaba. Dureeyyin biyya keessaafi ummanni biyya alaa leeccaloo gumachuun ummata hidhachiisuu qabu. Akkasumas poolisoonnif qondaalonni siyaasaa sirnicha tajaajilaa jiran kan ummata isaanitiif aantummaan itti dhagahamu haalota meeshaaleen waraana dhunfannaa mootummaa jala jiran harka qabsaa'ota Oromoo itti galan mijeessuu danda'u. Kunis kan too'annaa isaanii jala jiru dabarsanii kennuun dabalatee bakkoota kuusaa meeshaa waraanaa akeekuun ta'uu danda'a. Walumaagalatti garuma danda'ame maraan, biyya keessaayis ta'ee biyyoota alaarraa meeshaan waraanaa saffisaan harka Oromoo galuu qaba. Kana milkeessuun fuulleffannaa guddaa ( top priority) ta'uu qaba.
4) Caasaan fi waajjiraaleen bulchiinsaa Oromiyaa keessa jiran tajaajila ummata kennuu dhiisin meeshaa ukkaamsaaf cunqursaa ta'uun tajaajilaa jiran. Caasaaleefi waajjiraalee kana hiree argame hundaan barbadeessuun humna sirnichi qabu laamsheessuuf hedduu barbaachisaadha. Kanaafuu tarkaanfiin waajjiraalee bulchiinsaa irratti godinoota garii keessatti eegale bal'inaan itti fufuu qaba.
5) Adaduma tarkaanfiin Oromoon fudhatu cimaa deemuun humni waraanaafi bulchiinsa sirnichaa laaffataafi diigamaa deema. Baniinsa ( security and administrative vacuum) uumamu kun rakkoo akka hin uumneef caasaan bakka bu'u jaaramaa deemuu qaba. Bakka caasaan bulchiinsaa guututti diigametti, caasaan ummataa haaraan cinaatti ( parallel structure) jaaramuu qaba. Akkasumas kufaatii diinaa saffisiisuufi nagayaa fi tasgabbii ummataa eegsisuuf humni waraanaa biyyooleessaa bifa gurmaa'eefi tarsiimoo qoratamaan masakamu jaaramuu qaba. Waranni kun loltoota bilisummaa Oromoo bifa garagaatiin gurmaa'anii jiran, dargaggoota diinarraa qawwee hiikachuun iddoo garagaraatti gurmaa'anii socho'an akkasumas ilmaan Oromoo mooraa diinaa keessa sabatti dacha'niin jaarama.
6) Hojiilee armaani olitti kaafne kana qindeessanii galmaan gahuuf hawaasni siyaasaa ( political community) Oromoo mataa walitti qabachuu qaba. Kana galmaan ga'uuf ji' Fulbaanaa as deemu kana Waltajii Hogganoota Oromoo ( All Inclusive Oromo Leadership Summit) kan geggeessitoonni jaarmayaalee siyaasaa, hawaasaafi amantii akkasumas hayyoonni, abbootiin qabeenyaafi aartistoonni irratti hirmaatan ni taa'ama. Waltajjiin kun akeeka lama qabaata. Kan duraa Wixinee Oromoofi Oromiyaan garafuulduraa ittiin bulan ( Oromian National Charter) kan marii hirmaattotaatin bilchaatee raggaasifme qopheessa. kan lammataa dhaabbilee qabsoo kana xumuruufi bulchiinsa Oromiyaa bilisoomteetif bu'ura ta'uu danda'an jaara. Fakkeenyaaf garee diplomaasii keenya bifa waaltayeen geggeessu, kan gargaarsa ummata miidhamee ( humanitarian aid) bifa waaltayeen qindeessu faa of akka dhaabbatuuf haala mijeessa. Koreen waltajjii kana qopheessu yeroo gabaa keessatti dhaabbachuun hojii isaa saffisaan akka geggeessu taasifama.
Tarkaanfilee armaan olitti tarreessine kana murannoo, jabinaafi saffisa waggoota muraasa dabaran ittiin sochoo'aa turreen daran hojjachuun hojirra oolchuu barbaachisa. Nu cufti gahee keenya gahuumsaan haa baanu.
Dhugaa qabna, haqaaf falmanna, ni injifanna!! ''TARKAANFII ITTI AANU (JAWAR MOHAMMAD irra)
Posted by Hasan Ismail at 3:00 PM
Abdi Namo August 8, 2016 at 2:42 AM
waan dansa nuuf maxxansite. jiraadhu.